उमा सिंह, देश ले तिमी संग सबै छिन्यो मात्रै, तिमीले देश लाई धेरै दिन खोज्यौ अनि देशलाई मात लाग्यो र त , तिमीलाई नै छिनेरै लग्यो। आज भन्दा ३ बर्ष अगाडी राजनैतिक आश्था का कारण अहिले का देशका मालिक भनाउदाहरुले तिम्रा बाबा र दाजुलाई छिनेर लगे ।
तिमी त्यो चोट सहेर बस्यौं, तिमीले यसलाई चुनौति को रुपमा लियौ , नया नेपाल को सपना मा आफुलाई होम्यौ, कुनै स्वार्थ बिना निरन्तर आफ्नो पेसामा लाग्यौ। समाजमा भएका दुर्गुण र खराब तत्व को वकालत गर्यौ । समग्रमा नेपाल देशलाई मात लाग्यो अनि तिम्रो हत्या भयो । चुपचाप छन नेपाल देशका चालक हरु, तर तिम्रो बोली बोल्न र तिम्रो कलम चलाउन नेपाल देशमा मात्र नभई आज संसार भरीनै सबैजना तिमी जस्तै असल मानिस हरु तिम्रो पक्षमा उभिएका छन। तिमी माथि गरिएको कायरता पुर्बक हमला, ती कायर हरुले अवश्यपनि एक दिन पनि चुकाउने पर्ने छ । तिम्रो आत्माले चीर शान्ती पाओस तथा तिम्रा परिवार जन हरुलाई यो दुखद क्षण सहन सक्ने क्षमता प्रदान होस ।
Anonymous 1/13/09, 7:17 PM
कठै दैव तलाई दया पनि लागेन है, यस्ती करुण युबती लाई अकालमै लादा । उमा, तिम्रो आत्माले चीर शान्ती पाओस ! तिमीलाई हामी सधै गुमाउने छौं।
Anonymous 1/14/09, 9:07 AM
यो हत्याको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम् नै हुन्छ। एउटा मात्र आशा, सरकारले अपराधीलाई पकडेर देखाउन सकोस्।
Anonymous 1/14/09, 9:26 AM
Nepal goverment should hang those bastards who killed the innocent girl. Tara k garne even if they are captured, goverment will give them " AAM MAFI " .